Wadno wareejinta, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
John Bell wuxuu fursad u helay inuu sameeyo wax aan rajeyneyno inteena badan weligeen ma awoodi doonno inay sameeyaan: Wuxuu qalbigiisa ku qabtay gacmihiisa. Labo sano ka hor, wuxuu maray wadno-tallaal lagu guuleystay. Thanks to barnaamijka wadnaha ee wadnaha ee Xarunta Caafimaadka Jaamacada Baylor ee Dallas, wuxuu hadda awooday inuu qabto qalbigiisa hayey inuu sii noolaado 70 sano kahor intaan loo baahnayn in la badalo. Sheekadan cajiibka ah waxay i xasuusineysaa isu-beddelidda wadnahayga. Ma ahayn wadno wareejin "jidheed" - dhammaan kuwa raacsan Masiixa waxay soo mareen nooca ruuxiga ah ee hawshan. Xaqiiqda naxariis darada ah ee dabeecadeenna dembiga leh ayaa ah inay keento dhimashada ruux ahaaneed. Nebi Yeremyaah si cad ayuu ugu yeedhay: «Wadnuhu waa wax wasakh ah, oo waa caloolxumo, yaa garan kara :S: waa xanuun daran oo jira]? » (Jer.17,9).
Marka laga hor yimaado xaqiiqada shaqadeena 'qalbiga' shaqadeeda, way adagtahay in la qiyaaso in wali rajo jirto. Fursadaheenii badbaadadu waa eber. Laakiin sheyga yaabka leh ayaa innaga dhaca: Ciise wuxuu ina siiyaa fursadda keliya ee suurtagalka ah ee nolosha ruuxiga ah: Wadno wareejin gudaha ugu dheer ee jiritaankeena. Rasuul Bawlos wuxuu ku sharraxay hadiyaddan deeqsinimada leh inay tahay dib-u-cusboonaysiinta aadamigeenna, cusboonaysiinta dabeecaddayada bini-aadamka, beddelidda maankeenna iyo xoreynta doonisteenna. Waxaas oo dhami waa qayb ka mid ah howlaha samatabbixinta ee Ilaaha Aabbuhu ka dhex shaqeynayo wiilkiisa iyo Ruuxa Quduuska ah. Badbaadada-guud-wadaagga ah, waxaa naloo siiyay fursad cajiib ah oo aan ku beddelan karno qalbiyadeenna hore, dhimatay ee midka cusub, oo caafimaad qabta - qalbi buux dhaafinaya jacaylkiisa iyo noloshiisa aan dhiman karin. Bawlos wuxuu yidhi: Waan og nahay in odaygeennii hore iskutallaabta lagula qodbay isaga si jidhkii dembiga loo burburiyo si aynaan mar dambe dembiga ugu adeegin. Waayo, kii dhintay dembi wuu ka xoroobay oo xaq baa laga dhigay. Laakiin haddaynu Masiixa la dhimannay, waxaynu rumaysan nahay inaynu haddana isaga la noolaan doonno » (Rooma 6,6-8).
Ilaah wuxuu ku beddelay isbadal cajiib ah xagga Masiix si aan ugu helno nolol cusub isaga oo kuwadaagaya isaga iyo wehelnimada Aabaha iyo Ruuxa Quduuska ah. Markii aan galnay sannadka cusub, ha xusuusno in maalin walba oo nolosheena ah ay nagu leeyihiin oo keliya nimcada iyo wanaagga kan noogu yeedhay - xagga Rabbigeenna ah Bixiyeheenna, Ciise Masiix!